Ny andriamby NdFeB sy SmCo matanjaka dia mety hiteraka herinaratra handroahana zavatra sasany nefa tsy misy fifandraisana mivantana, ka fampiharana be dia be no manararaotra an'io endri-javatra io, toy ny fametahana andriamby ary avy eo paompy mifangaro ho an'ny fampiharana tsy misy tombo-kase. Ireo rojom-pamokarana andriamby dia manome famindrana tiro tsy mifandray. Ny fampiasana ireo fitambarana andriamby ireo dia hanafoana ny famoahana rano na gazy avy amin'ny singa ao amin'ny rafitra. Ankoatr'izay, ny fikolokoloana andriamby dia tsy misy fikojakojana ihany koa, noho izany mampihena ny vidiny.
Ahoana ny fomba hanokanana ireo andriamby ao anaty fitambarana pump pump?
Ilay mifangaro NdFeB na SmCony andriamby dia miraikitra amin'ny peratra roa (concentric) eo amin'ny andaniny sy ny akorany fitoeran-drano eo amin'ny fonon'ny paompy. Ny peratra ivelany dia miraikitra amin'ny vatan'ny fiara; ny peratra anatiny amin'ny vatan'ny paompy. Ny peratra tsirairay dia misy isa mitovy amin'ny andriamby mifanandrify sy mifanohitra, nalahatra tamin'ny tsatokazo nifandimby manodidina ny peratra tsirairay. Amin'ny alàlan'ny fandefasana ny antsasaky ny valiny ivelany, ny tselika dia ampitaina manintona amin'ny antsasaky ny fitambarana anatiny. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny rivotra na amin'ny alàlan'ny sakana tsy misy andriamby, ahafahana mitoka-monina tanteraka ireo andriamby anaty avy amin'ireo andriamby ivelany. Tsy misy faritra mifandraika amin'ny paompy drive magnet izay mamela ny famindrana tiro amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny angular sy ny parallel.
Fa maninona no voafantina ao anaty fonosam-paompy magnetika ny NdFeB na SmCo?
Ireo akora andriamby ampiasaina amin'ny fametahana andriamby dia matetika Neodymium sy andriamby Samarium Cobalt misy ireto antony ireto:
1. NdFeB na SmCo magnet dia karazana andriamby maharitra, izay mora kokoa noho ny andriamby elektro izay mila famatsiana herinaratra ivelany.
2. Ny magnets NdFeB sy SmCo dia mety hahatratra angovo avo kokoa noho ny andriamby maharitra mahazatra. Neodymium sintered magnet dia manome ny vokatra angovo avo indrindra amin'ny fitaovana rehetra ankehitriny. Ny hakitroky ny angovo avo kokoa dia manome lanja maivana kokoa ny fitaovana maherifo kely kokoa hahatratra ny fahombiazan'ny rafitra paompy iray manontolo miaraka amin'ny habeny kely.
3. Ny andriamby Cobalt an-tany tsy fahita sy ny magnet Neo dia afaka miasa miaraka amin'ny fitoniana amin'ny hafanana tsara kokoa. Amin'ny fizotran'ny asa, satria mihamitombo ny mari-pana miasa na manafana vokarin'ny tondra-drano ankehitriny, ny angovo andriamby ary avy eo ny herin'ny herinaratra dia mihena kely kokoa noho ny coefficients mari-pana tsara kokoa sy ny mari-pana miasa ambony kokoa an'ny andriamby voapaika NdFeB sy SmCo. Ho an'ny mari-pana avo lenta na tsiranoka manimba, ny SmCo magnet no safidy tsara indrindra amin'ny fitaovana andriamby.
Inona ny endrik'ireo andriamby NdFeB na SmCo ampiasaina amin'ny fitifirana paompy andriamby?
Ny andriamby SmCo na NdFeB voafafy dia azo vokarina amin'ny endrika sy habe. Ho an'ny fampiharana amin'ny valiny paompy magnetika, ny endriny andriamby indrindraandian-tsoratra, -kanina na fizarana arko.
Ny mpanamboatra lehibe ho an'ny fametahana andriamby maharitra na paompy mitambatra manerantany:
Fotoana fandefasana: Jul-13-2021